CONSULTATION TELEPHONE - World Trade Exchange
Manaova fandaharana fifampidinihana amin'ny telefaona WTE Mpanolo-tsaina anio… raha mila valin'ny fanontaniana ianao, vahaolana amin'ny olanao, fotoana mety hivoahana, na hevitra sy paikady hahatratraranao haingana ny tanjonao!
Nahoana wte consultants?
WTE Ny consultants dia manana traikefa am-polony taona niasa niaraka tamin'ny orinasa Fortune 500, ary koa masoivohon'ny governemanta amerikana maromaro ary ireo mpiantoka mpiaro lehibe indrindra toa ny Lockheed Martin Corp., Boeing Co., General Dynamics Corp., Northrop Grumman Corp., Raytheon Co., United Technologies Corp., McKesson Corp., Leidos Holdings Inc., Huntington Ingalls Industries Inc., Harris Corp., Humana Inc., BAE Systems Plc ary maro hafa. Izy ireo dia niasa ho mpanolo-tsaina an'ny UNCTAD, UNESCAP, World Trade Organization (WTO), orinasa iraisam-pirenena, masoivoho iraisam-pirenena, manam-pahefana any amin'ny firenena 100+ ary fikambanana lehibe hafa.
INONA NO AZONAY ATAO ANAO?
Afaka manampy anao izahay hamorona ny sanda tadiavinao amin'ny alàlan'ny fanomezana anao fidirana amin'ny renivohitra sy famatsiam-bola tsy manam-petra, vahaolana azo ampiharina, fotoana azo ihodivirana, paikady vaovao, drafitra tsy misy fotony, drafitra miorina amin'ny fampiharana, torolàlana azo zahana ary dingana fenoina horaisina ho an'ny orinasa fara tampony. valiny izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao manokana sy ny toe-javatra misy anao. Fa, ny tena zava-dehibe, izahay dia afaka manampy anao MAMPIASA ny tsara indrindra amin'ireo hevitra, tetika, drafitra na vahaolana hahazoana valiny azo antoka ireo!
Miaraka amin'ny fahaizana sy mpanjifa manerana mihoatra ny Indostria sy sub-indostria 7,000 ary tambajotram-pitaovana manerantany, WTE Ny consultants dia afaka manolotra fantsom-pizarana vaovao, fidirana amin'ny renivohitra tsy manam-petra, ary ny valim-panovana ho anao amin'ny orinasa, indostria, na tsena na aiza na aiza misy anao.
NAHAZO OLANA SY OLANA HAMONJENA?
STEP 1. Alefaso ny antsipirian'ny olana sy fanamby.
Dingana 2. WTE Hanome anao vahaolana mahomby indrindra ny consultants amin'ny famahana ny olanao na ny olana atrehinao ao anatin'ny 24 ora. Ho fanampin'izay, ianao dia hahazo sary eo no ho eo, feno ary feno (amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, feno ohatra maro ho maodely) fanazavana momba ny:
Ahoana no hanaovana azy.
Fomba fanaovana azy amin'ny fomba fijery, paradigma ary teboka efatra tsy mitovy farafahakeliny - hendry amin'ny indostria, hendry amin'ny fampiharana, hendry amin'ny olana, hendry amin'ny fanamby.
Fomba hanaovana azy amin'ny ezaka faran'izay kely, risika na fandaniana.
Maninona, rahoviana no hanaovana azy - ho an'ny fahombiazana farany sy ny fiatraikany amin'ny famahana izany olana izany.
Azonao atao ny mandray ny toe-java-misy eo amin'ny orinasa, ny olana, na ny fanamby… ary hamaha izany amin'ny fomba mahomby — miaraka amin'ny vahaolana mahomby sy mahomby misy amin'ny alàlan'ny WTE Consultants
Mila hevitra, paikady ary drafitra hahatratrarana ny tanjonao?
Dingana 1. Alefaso ny antsipirian'ny tanjona sy tanjona tianao ho tratrarina.
Dingana 2. WTE Ireo mpanolotsaina dia hanome anao paikady fandresena telo feno telo ka hatramin'ny telo-polo, torolàlana momba ny turnkey, valiny azo antoka ary drafitra fanatanterahana tsikelikely amin'ny fanatanterahana ireo tetikasanao ary hahatratrarana haingana kokoa ny tanjonao mihoatra ny noeritreretinao hatao.
Amin'ireto hevitra sy tetika ary drafitra ireto dia afaka mivoaka mora foana ianao, manambola, mivoaka ivelany, mivoaka, mivoaka, mahazo tombony ary mahazo tombony be amin'ireo mpifaninana matanjaka indrindra aminao alohan'ny hahafantarany izay mahazo azy ireo.
Azonao atao ny manamboatra fitomboana mivelatra, manatsara ny tombom-barotra mandritra ny alina, manjaka ny tsena, mamorona harena be, mahazo tombony azo avy amin'ny fifaninanana eo amin'ny sehatra misy anao, orinasa, na tsena.
MITADY VOLA VOAFITSY?
Dingana 1. Alefaso ny antsipiriany momba ny orinasa, ny indostria, na ny tsena izay ilanao mahita fotoana mahomby.
Dingana 2. WTE Ireo mpanolo-tsaina dia hahita ary hanome anao fotoana tsy azo jerena, loharanom-bola tsy voatanisa, fananana miafina, hetsika tsy dia misy dikany, fidiram-bola vaovao ahazoam-bola, ivontoerana tombony ary bonanzas amin'ny fividianana vola izay efa nandositra anao sy ny fahatsiarovan'ny indostria anao ary ny fomba fitrandrahana azy ireo tsara indrindra.
Hahazo fotoana misimisy amin'ny "fiainana tena izy", ohatra amin'ny fandinihana tranga, torolàlana ary dingana amin'ny antsipiriany azonao alaina modely na fananganana ireo fotoana mety hahitanao voka-tsoa.
INONA NO TORITENY ANAO REHETRA IZAO?
Midika izany fa amin'ny manaraka ianao miatrika raharaha sarotra, manan-danja, na manakiana, olana ara-bola, fitantanana, varotra na marketing, dia tsy irery intsony ianao.
Alao sary an-tsaina ny toe-javatra iray izay mety efa niatrika zato heny teo amin'ny sehatry ny asa aman-draharahao…
Mipetraka eo amin'ny latabatra misy anao ianao:
Olana sy fanamby maro hamahana.
Fe-potoana iray hahatratrarana ny lasibatrao, ary eo aoriana lavitra amin'ny kendrenao ianao.
Filana maika ny fotoana hahafahana mamarana ny fifanarahana.
Raha tokony hivoaka amin'ny hatsembohan'ny fisafotofotoana, ny adin-tsaina ary ny fanerena ianao dia azonao atao ny mampiditra ireo serivisy WTE Mpanolo-tsaina ary miala sasatra. WTE Hamaha ny olanao ny mpanolo-tsaina, hanampy anao hahatratra ny tanjonao alohan'ny fe-potoana rehetra, ary hanome anao fotoana tsy ampoizina haingana mihoatra ny noeritreretinao fa mety!
Azonao atao ve ny mahita ny lanjan'ny fitazonana ireo serivisy an'ny WTE Mpanolo-tsaina amin'ny asanao isan'andro? Enga anie.
MIARAKA AMIN'NY WTE mpanolo-tsaina
Fandaharam-potoana CONSULTATION IZAO
CONSULTATION ANDRO SATRANY
CONSULTATION ANDRO FENO
CONSULTATION IRAY IRAY
CONSULTATION TAONA ROA
Fandaharam-potoana CONSULTATION IZAO.
Fenoy eto ambany ilay takelaka
Inona no tanjona voalohany amin'ny fotoana tadiavinao a WTE Consultant?
Inona no nataonao taloha mba hanandramanao hamaha ity olana ity?
Inona avy ireo fampahalalana azonao omena mba hahavitana fotoana miaraka a WTE Mpanolotsaina mahomby indrindra araka izay tratra?
CONSULTATION ISAN'ANDRO CONSULTATION ANDRO SATRANY CONSULTATION ANDRO FENO CONSULTATION HERINANDRO CONSULTATION IRAY IRAY CONSULTATION TAONA ROA